Madaxwaynihii hore ee Galmudug ayaa Eedayn u jeediyey dawlada federaalka - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka Madaxwaynihii hore ee Galmudug ayaa Eedayn u jeediyey dawlada federaalka
Muqdisho (Walwaal Online)- Siyaasiga Cabdi Kariin Xuseen Guuleed kana mid ah Xubnaha Midowga musharixiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Federaalka ay dayacay amniga Guud ee dalka.
Qoraal uu soo dhigay Bartiisa Facebook ayaa waxaa uu ku sheegay in maalmihii la soo dhaafay ay xoogeyteen lalka kooxaha argagixisadaha ah, isla markaana Markii madaxda iyo saraakiishii amnigu ay ku mashquuleen arrimaha siyaasadda iyo doorashada.
Ugu dambeyn Cabdi Kariin guuleed ayaa dadka reer Muqdisho ugu baaqay iney si miir-qableh u wajahaan dhacdooyinka ku gadaaman arrimaha doorashooyinka, gaar ahaan ammaanka.
Hoos Ka Akhriso Qoraalka Siyaasiga Cabdi Kariin Xuseen Guuleed.
Waxaa muuqata in Dowladda Federaalka ah ay si buuxda u dayacday amnigii guud ee dalka gaar ahaan midkii caasimadda bilihi lasoo dhaafay, taas oo sababtay iney si weyn usoo xoogeystaan falalka kooxaha argagixisadaha ah. Waxaan ka tacsiyeynaya dhibaatooyinkii ka dhashay Qaraxyadii iyo weeraradii dalka ka dhacay labadii toddobaad ee lasoo dhaafay.
Previous articleSuxufi ka mid ahaa suxufiyiinta caanka ah oo geeriyooday
Next articleHeshiiskii khatarta geliyey jiritaanka Soomaaliland ee meel marka noqon waayey.